MPITORITENY 5.1-19	F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
MPITORITENY 5.1-19	F. 6
Efao ny voadinao. Teny nambara kasaina hotanterahina ary hizingizinina fa hotanterahina ny voady. Koa na dia eo imason’olombelona aza no hanambarana ny voady kanefa tsy tanterahina dia miteraka fahasorenana sy fahadisoam- panantenana hoan’izay nanaovana azy. Zary mivadika ho lainga na fampanantenana poakaty. Mainka fa eo anatrehan’Andriamanitra?! Tsy voatery atao ny voady fa ampy ny manatanteraka izay nokasaina. Tsara lavitra aza izany.
Misy ny ambony kokoa. Mandrakariva ny olona mihevi-tena ho zavatra dia manao tsinontsinona ny mahantra sy ny olona tso-piaina. Araka ny fiheverany dia olona ambony izy, manana fahefana sy afaka manao izay tiany atao na dia mampahory ireo izay heveriny ho ambany noho izy aza. Tsy fantany fa Andriamanitra no fahefana ambony indrindra izay hitsara ny olona araka izay nataony tety an-tany (Romana 14.22).
Fanomezan’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina : ”Jehovah no mampalahelo sy mampanan- karena” (1Samoela 2.7a) – ary koa : ”Ny fitahian’i Jehovah no mampanan-karena, Ary tsy azon’ny fisasarana ampiana izany” (Ohabolana 10.22). Ka dia tsy avy amin’ny fahaizana na ny fahendrena na koa ny fisasaran’ny olona loatra no hananany harena fa fanomezan’Andriamanitra maimaimpoana. Ny tena fanirian’i Jesosy dia ny hikatsahantsika voalohany indrindra ny haren’ny lanitra ka hoy Izy: ”Aza mihary harena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra” (Matio 6.19-20) ary koa: ”Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany” (Matio 6.33)